Shina fialofana hopitaly oksizenina orinasa sy ny mpanamboatra | Sihope
Ozinina oksizenina ara-pitsaboana
Ozinina Oxygen PSA misy boaty
Mpamokatra oksizenina ao anaty container
Plasma fanadiovana rivotra sterilizer
Fitaovana fanasarahana rivotra indostrialy
Famoronana ozonina mitambatra
toeram-pialofana oksizenina hopitaly
Fanamainana rivotra voaporitra KBA mitambatra
ozinina fitsaboana oksizenina ao anaty container
PSA oxygen generator dia fitaovana mandeha ho azy izay manasaraka oksizenina amin'ny rivotra. Araka ny fahombiazan'ny sivana molekiola, ny adsorption rehefa miakatra ny tsindry ary ny desorption rehefa mihena ny tsindry. Feno mason-drongony ny tavan'ny molekiola sy ny atiny ary ny atiny. Ny molekiola nitrogén dia manana taham-pielezana haingana kokoa ary ny molekiola oksizenina dia manana taham-pielezana miadana kokoa. Ny molekiolan'ny oksizenina dia ampitomboina amin'ny farany avy amin'ny tilikambo mitroka.
Oxygène mpamokatra dia naorina araka ny fitsipiky ny asa PSA (pressure swing adsorption) ary nopotehina tamin'ny tilikambo roa hisakana ny fiasan'ireny feno sivana molekiola. Ny tilikambo fitehirizana roa dia miampita amin'ny rivotra mipoitra (menaka voadio teo aloha, rano, vovoka, sns). Raha mamokatra oksizenina ny iray amin'ireo tilikambo mitroka, ny iray kosa mamoaka gazy azota ho any amin'ny atmosfera. Ny dingana dia tonga amin'ny fomba tsingerina. Ny mpamokatra dia fehezin'ny PLC.
Oxygène dia entona tsy misy tsirony. Tsy misy fofona na loko. Mahatratra 22% amin'ny rivotra izy io. Ny entona dia ampahany amin'ny rivotra ampiasain'ny olona miaina. Ity singa ity dia hita ao amin'ny vatan'olombelona, ​​​​ny Masoandro, ny ranomasina ary ny atmosfera. Tsy ho velona ny olombelona raha tsy misy oksizenina. Anisan'ny tsingerin'ny fiainan'ny kintana koa izy io.
Fampiasana mahazatra ny Oxygène
Ity gazy ity dia ampiasaina amin'ny fampiharana simika indostrialy isan-karazany. Ampiasaina izy io mba hanamboarana asidra, asidra solifara, asidra asidra ary zavatra hafa. Ny variana mihetsiketsika indrindra dia ny ozone O3. Izy io dia ampiharina amin'ny fanehoan-kevitra simika isan-karazany. Ny tanjona dia ny hanamafisana ny tahan'ny fanehoan-kevitra sy ny oxidation ny zavatra tsy ilaina. Ny rivotra oksizenina mafana dia ilaina mba hanaovana vy sy vy ao anaty lafaoro fanapoahana. Misy orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany mampiasa azy io handrava vato.
Fampiasana amin'ny indostria
Ny indostria dia mampiasa ny entona amin'ny fanapahana, ny lasantsy ary ny fandoroana metaly. Ny entona dia afaka miteraka mari-pana 3000 C sy 2800 C. Izany dia ilaina amin'ny oxy-hydrogène sy oxy-acetylene tsoka fanilo. Toy izao ny fomba fanaovana lasantsy mahazatra: atambatra ny ampahany metaly.
Ampiasaina ny lelafo amin'ny hafanana ambony mba handrendrehana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanafanana ny fihaonan-dalana. Miempo sy mivaingana ny tendrony. Hafanaina ny tendrony iray mandra-pivadika mena. Ampitomboina ny haavon'ny oksizenina mandra-pahatonga ny singa mafana mena mena. Manalefaka ny metaly izany ka azo fehezina.
Ity entona ity dia ilaina amin'ny famokarana angovo amin'ny fizotran'ny indostria, mpamokatra ary sambo. Ampiasaina amin'ny fiaramanidina sy fiara koa izy io. Amin'ny maha-oxygène ranon-javatra azy, dia mandoro solika ao amin'ny sambon-danitra izy io. Izany dia miteraka ny tosika ilaina amin'ny habakabaka. Manakaiky ny oksizenina madio ny akanjon'ireo mpanamory sambondanitra.
1: Taratasy sy Pulp indostrian'ny Oxy bleaching sy delignification
2: Indostria fitaratra ho an'ny fandoroana lafaoro
3: Indostria metallurgical ho an'ny oksizenina fanatsarana ny lafaoro
4: Indostria simika ho an'ny oxidation fanehoan-kevitra sy ny insinerators
5: Fikarakarana ny rano sy ny rano maloto
6: Metal entona welding, fanapahana sy brazing
7: Fiompiana trondro
8: Indostria fitaratra
Famaritana fohy ny fizotran'ny dingana
Tabilao fifantenana ny rafitra oksizenina sivana molekiola ara-pitsaboana
MODELY votoaty oksizenina Nm³/h Fampiasa napetraka KW Ny habetsahan'ny fandriana hôpitaly (tapa)
Efa ho 20 taona izahay no nanao andian-tsarimihetsika fanasarahana rivotra. Miaraka amin'ny fanohanan'ny rafitra fitantanana tonga lafatra sy ny fitaovana famokarana mandroso, dia manao fanatsarana ara-teknolojia tsy tapaka izahay. Nanangana fiaraha-miasa tsara maharitra miaraka amin'ireo ivon-toeram-pikarohana sy famolavolana maro. Ny fitaovana fanasarahana ny rivotra dia manana fampisehoana tsara kokoa sy tsara kokoa.
Ny orinasa dia nandalo ISO9001: 2008 fanamarinana. Nahazo voninahitra maro isika. Ny tanjaky ny orinasanay dia mitombo hatrany.
Faly miarahaba ny mpanjifanay rehetra izahay mba hanorina fiaraha-miasa mahomby aminay.
teo aloha: milina fanaovana entona azota
Manaraka: Ozinina famokarana oksizenina hopitaly China
Hopitaly Oxygen Manufacturing Plant
Ozinina Oxygène Mobile Cabin Hospital
Ozinina famokarana oksizenina ho an'ny hopitaly
Ozinina oksizenina ho an'ny hopitaly
Ozinina Oxygène Hopitaly Fialofana
Fitaovana entona medikaly karazana psa oxygen generator
Fitaovana famokarana entona madio indrindra PSA Oxygen...
Gas Solution Oxygène Plant ho an'ny Medical/Industri...
Fampandehanana mandeha ho azy fanasarahana rivotra PSA ox ...
Medical Psa Oxygen Gas Generator Making Machine...
Medical Air separation fitaovana
Hatreto, misy orinasa 1000 mahery sy andrim-pitsaboana nisafidy ny vokatray.
Distrikan'i Fuyang, Tanànan'i Hangzhou, Faritanin'i Zhejiang